Tuesday February 13, 2018 - 00:37:35 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Muse Bixi weli wakhti yar ayuu kursiga ku fadhiyaa, waxana isaga laaqan hawlaha hor yaalla iyo sidii uu kala hormarin lahaa,
si uu dalka ugu hoggaamiyo tubta toosan. Laakiin waxa uu malaha weli la'yahay ciddii siin lahayd talo waafiya, oo uu wax kaga qabto catabadaha hor yaalla.
Tusaale ahaan, waxa dalka immiga aad u naafeeyey sicir-barar noloshii cirka ku shareeray, Musuq maasuq ay shaqaalihii ama shacabkiiba caadaysteen iyo qabyaalad maamulkii ragaadisay, shacabkii oo aan u sinnayn maamulkii iyo tayo xumo maamul. Afaraasi arrimood iyo kuwo kale oo la halmaalaaba, waa dhibaatooyinka uu Muse Bixi ugu yimid kursiga, laakiin Muse Bixi ma abuurin. Waxase looga fadhiyaa in uu gacanta gasho oo uu wax weyn ka qabto. Balse xukuumadda uu dhistay uma ega mid wax kala qaban karta oo kartideedii iyo aqoonteedii leh. Waxana ugu horreyn uu u baahan yahay in uu si deg deg ah u sameeyo isku shaandhayn, uu mar kale tijaabiyo sidii uu u heli lahaa mas'uuliyiin xul ah oo aqoon iyo karti u leh maamulka.
Sidaasi dareeddeed, haddii lagu guulaysto in la tamceeyo SICIR BARARKA iyo FAQRIGA, waxa iyana xal deg deg ah loo heli karaa arrima badan oo ay dhaqaala xumidu cagaha ku wadato. Sida ammaan darrida, kala qaybsanaanta, caddaalad darrida, shaqo la'aanta, tahriibka iyo maamul xumada dirkaba.